जूता - यो सबै भन्दा साधारण र मनपर्ने को छ जूता को प्रकार हाम्रो देशमा। तिनीहरूले तुर्की nomads हामीलाई आए र चाँडै आचरण को अवसर भयो। साधारण मान्छे, तिनीहरूले उपलब्ध थिए, तर शासकहरुले सवारी र शिकार को आफ्नो सजिलो सराहना। कपडा, मोरक्को, रूस छाला: विभिन्न समयमा विभिन्न तिनीहरूको निर्माण को लागि सामाग्री। लोकप्रियता जूता वर्षौंदेखि अंतर रहन्थ्यो, तर आफ्नो सुविधा बारे तर्क छैन। आफ्नो आवेदन र तिनीहरूले सशस्त्र भेटिए। कक्षाहरू मा विभाजन उचित र लाल सेना थियो। तसर्थ, साधारण सिपाही कारण सेना लागि गरिब समर्थन गर्न पदक जूता थिए, तर अधिकारीहरु नयाँ जूता दिइएको थियो: क्रोम, Yalova, रूसी छाला। जूता को अभाव भए तापनि, यो परम्परा सोभियत सेना मा unshakeable छ।
1916 मा, जूता संग उहाँले एक उत्सुक मामला सम्बन्धित थियो। समयमा राज्य Chrome जूता अधिकतम मूल्य, 36 rubles बराबर सेट। सरकार व्यापार मा एक वारंट अधिकारी एक जोडी किनेको, तर 45 rubles को लागि, र के एक कोषाध्यक्ष गरेको चेक प्रमाणित भएको थियो। तथापि, तिनीहरूले 36 rubles निर्दिष्ट खाता थियो एक योगफल अनुरोध गरियो। एनसाइन निकटतम प्रहरी चौकी सम्पर्क गर्नुहोस्। फलस्वरूप, यस दोकान मालिक र आफ्नो कर्मचारी राज्य बाधा द्वारा स्थापित भन्दा उच्च मूल्यहरु मा बिक्रीको लागि एउटा सानो जेल सजाय सुनाइयो पाए।
Chrome pigskin, क्रोम बाछो, polukozhnik, Rawhide, goatskins, vyrostok: chrome जूता छाला को विभिन्न प्रकार देखि जूता संयोजन। सबै प्रकार प्रयोग कच्चा सामाग्री, प्रक्रिया परिष्करण र रंगाई, रंग र मोटाइ लागि प्रत्येक अन्य फरक। को बुट लागि सबै भन्दा राम्रो सामाग्री - यो कि क्रोमियम बाछो विश्वास छ। जूता अधिकारी Chrome अझै पनि सफलता आनन्द। क्षणमा तिनीहरूले विशेष सैन्य वा Cossacks को दराज को भाग छैनन् हुनत। अब तिनीहरूले प्रयोग र विभिन्न उद्योग को कर्मचारीहरु छन्। यो मौका द्वारा छैन। कारण छाला र यसको लाउने गुणस्तर गर्न, Chrome जूता थकित खुट्टा र पसिना दिन छैन। तिनीहरूले खुट्टा को अधिकतम तापक्रम कायम र सबैभन्दा वातावरण मैत्री मानिन्छ।
क्रोम जूता मात्र क्रोम छाला बनेको छन्। यो कुरा छाला वा फर को कुनै पनि अन्य प्रकारको प्रयोग गरेर, मौसम आधारमा छ। आफ्नो एकमात्र रबर वा polyurethane। को insole छाला र कपडा वा कपडा र गत्ता मा सिलना छ। क्रोम जूता जूता को धेरै विश्वसनीय प्रकार मानिन्छ। आफ्नो एकमात्र बस शीर्षमा चिपके किनभने, तर पनि सिलना। प्रबलित खुट्टाको औंलासम्म थप आवेषण संग पृष्ठभूमि। वर्षौंदेखि गुणस्तर सबै बिग्रन छैन, तर डिजाइन केही परिवर्तन भइरहेको छ। अब तिनीहरूले एक मानकीकृत लम्बाइ छैन। वर्तमान क्रोमियम जूता टखने सम्म पुग्न सक्दैन वा उच्च हुन।
अब जूता को कुनै कमी छैन। तसर्थ, क्रोम जूता किन्न एक तस्वीर छ। धेरै जुत्ता स्टोर, अनलाइन साइटहरु शरद ऋतु मोडेल र जाडो जस्तै विकल्प को एक किसिम प्रस्ताव। तपाईं जो प्रस्ताव निजी र विज्ञापन, र दोस्रो हात र नयाँ जूता धेरै पाउन सक्नुहुन्छ। यो जुत्ता को लागत बारे 2.5 मिलियन rubles सुरु हुन्छ। यो क्रममा Chrome जूता सी गर्न सम्भव छ हुनत। जो मामला मा त्यहाँ जूता आफ्नो खुट्टा मा बस्न सिद्ध हुनेछ भन्ने एक विश्वास छ। स्वाभाविक, यस्तो उत्पादनहरु को मूल्य अलिकति उच्च हुनेछ। तर सुविधा, गुणस्तर र आराम, निश्चित लायक।
शैली 90 को दशक वस्त्र आधुनिक fashionistas
बांधन shoelaces - मूल संस्करण को एक लाख! आफ्नो चयन गर्नुहोस्!
आउटलेट - यो के हो? एक आउटलेट स्टोर के हो?
ट्यांक को खेल विश्व मा Jovi जस्तै प्रसिद्ध स्थलहरुको, र अन्य उपयोगी additives
छाँट्ने आलुबखडा शरद ऋतु: उद्देश्य र सुविधाहरू
किन यो नाम को अर्थ थाहा महत्त्वपूर्ण छ? एमिली peculiar वर्ण हो
एक Lay-कोठा अपार्टमेन्ट कसरी बनाउने
Filmmaker अकी Kaurismaki - फिनल्याण्ड को गर्व
किन ट्याबहरू विज्ञापन खुला? के भने विज्ञापन खुला निरन्तर ट्याबहरू?